Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy momba ny Fakta
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" fantatra amin'ny anarana hoe "Ilay tsikitsiky". Ny tantaranay momba an'i Aaron Connolly Childhood Story Plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ireo hetsika lehibe hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy misandratr'i Aaron Connolly. Credits sary: Telegraph, Independent ary Twitter
Eny, fantatry ny rehetra fa izy no zatovo malaza izay nanala ny Spurs tamin'ny fanombohana ny Ligy Premier voalohany tamin'ny vanim-potoana 2019 / 2020. Na izany aza, vitsy ny mihevitra ny biography Aaron Aaron izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, i Aaron Anthony Connolly no anarany feno. Aaron Connolly dia teraka tamin'ny andro 21 tamin'ny Janoary 2000 tamin'ny reniny, Karen Connolly sy ny rainy, Mike Connolly any Oranmore, tanàna any amin'ny Repoblika Irlanda. Connolly no zaza voalohany nateraky ny ray aman-dreniny Irlandiana mahafinaritra izay naseho eto ambany.
Hihaona amin'i Aaron Connolly Ramatsy Karen sy Mike. Sary: Independent
Avy amin'i Oranmore, tanàna any County Galway, andrefan'ny Irlanda i Aaron Connolly. Ilay toerana niaviany dia matetika antsoina hoe ny kolotsaina Irlandy, toerana fantatra amin'ny fomba fiaina sy fety fankalazana marobe.
Ny fomba fijery mahafinaritra an'i Oranmore any Galway County, Ireland - izay niavian'i Aaron Connolly. Ny trosa Irelandbeforeyoudie
Aaron Connolly tsy nobeazina tamin'ny fianakaviana manankarena. Ny ray aman-dreniny dia toy ny ankamaroan'ny olona izay manao asa Irlandey salanisa, nefa tsy niady vola tamin'ny fitaizana fianakaviana. Araka ny tatitry ny media sosialy dia lehibe i Aaron Connolly niaraka tamin'ny rahalahiny antsoina hoe Ethan Connolly izay toa azy ihany koa dia lasa mpanao baolina kitra.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Fanabeazana sy fanabeazana
Ny ray aman-drenin'i Aaron Connolly tamin'ny voalohany dia naniry ny zanak'izy ireo ho manam-pahaizana fa tsy hevitra velively fa hanao izany amin'ny fanatanjahantena izy. Rehefa afaka izany, i Connolly dia hanao ezaka amin'ny maha-manam-pahaizana azy ao amin'ny Sekolim-pirenena Brierhill ao atsinanan'i Galway. Teo am-pianarana dia nanopy maso tsara ny sehatry ny baolina izy teo anilan'ny sekoly izay matetika izy dia milalao baolina rehefa vita amin'ny kilasy.
Mpampianatra teo aloha ao amin'ny Sekolim-pirenena Brierhill iray izay mitondra ny anarana hoe Conor Hogan dia mahatsiaro an'i Aaron Connolly, tanora iray, ilay zazalahy kely izay manao satroka baolina manidina manodidina an'io toerana io ary mandaka ny baolina kitra, na inona na inona toetr'andro.
Ny fiandohan'i Aaron Connolly tany am-pianarana Brierhill National. Sary: Twitter
"Mpampianatra nisolo toerana tany aho nandritra ny enim-bolana ary tadidiko fa manana an-jaza 30 ny kilasy nataony ary i Aaron Connolly dia isan'ireo ladoany izay tena kely saina." Tsaroan'i Conor Hogan, mpampianatra taloha an'i Aaron.
Amin'ny maha-zatovo tanora azy dia nianatra ny varotra baolina kitra i Aaron Connolly tamin'ny alàlan'ny ho mafy sy mihena. Nisy fotoana niseho tamin'ny ray aman-dreniny tsy dia be loatra ny fisalasalana fa nandeha tamin'ny lalana tokony halehany i Arona. Farany, ny fireharehan'ny fianakavian'i Aaron Connolly sy ny mpampianatra ao an-tsekoly dia tsy nahalala fehin-kibo rehefa nahazo fanasana hiatrika fitsarana any Mervue United izy.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Tamin'ny taona 2011, i Aaron Connolly dia nanao ny diany tany amin'ny klioban'ny sekoly ambony any Galway, Mervue United izay nahazoany ny Akademia taorian'ny nandalovany ny fitsapana azy amin'ny loko manidina. Noho ny fahafantarany ny fanirian'izy ireo hilalao baolina kitra hivelomana dia nanao izay rehetra azony natao ny ray aman-drenin'i Connolly hanohanana ny faniriany.
Aaron Connolly Life Career Life. Ny trosa amin'ny Twitter
Tsy ela akory dia nampifanaraka i Aaron Connolly ary nanomboka naneho fahatsapana tao amin'ny akademia ary nahazo ny mari-boninahitra fanatanjahan-tena voalohany (jereo etsy ambony). Nanainga ny laharana haingana izy ary nasaina handray anjara amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena marobe.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Road to Fame Story
Ny tantaran'ny fahombiazan'ny baolina kitra voalohany nataon'i Aaron Connolly dia tamin'ny fifaninanana iray rehefa nibata ny 18 tamin'ny taona 15 taona izy. Ny zava-bitan'ny whizkid dia nahita azy nanampy ny ekipany hahazo tropy ao an-toerana izay tena nisy dikany tamin'ny ray aman-dreniny.
Aaron Connolly Road ho Fame Tantara. Ny trosa Independent
Noho ny fahombiazany dia lasa mpilalao tsara indrindra tao amin'ny paroasy iray manontolo ny Castlegar, Galway, Irlandy. Io fampisehoana io ihany koa no nahafahany niditra skoto avy amin'ireo klioba baolina anglisy anglisy ary anisan'izany i Brighton.
Tamin'ny taona 2016, i Aaron Connolly no nandray ny fanapahan-kevitra manohy ny dingana fahamatorana ny baolina kitra any ivelany. Fotoana iray nanaovany a mifindra manerana ny Ranomasina Irlanda, hiaraka amin'i Brighton & Hove Albion izay nanasa azy hiatrika fitsarana taorian'ny fahitana ny fampisehoana nataony. Tena nahavariana tokoa izy nandritra ny fotoam-pitsapana nataony sy ny fikambanana hanomezana vatsim-pianarana roa taona. Tamin'io taona io ny 2016, dia nasaina hisolo tena ny Irlandey U17 izy ary nandray anjara tamin'ny Irish School FA Cup izay azony.
Aaron Connolly rehefa avy nandresy tamin'ny amboara Irlandey FA Cup. Sary nahazoany sary TheArgus
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Mitsangàna amin'ny tantara
Aaron Connolly dia nitombo avy amin'ny tanjaka hazakazaka ho an'ny baolina kitra sy ny baolina kitra an'ny firenena. Tao amin'ny 2017, izy no mpilalao goavambe tamin'ny sehatra mendrika ho an'ny 2017 UEFA European Under-17 Championship, ka nahafaty baolina fito tamin'ny lalao enina.
Io fampisehoana io dia nahatonga azy haingana haingam-pandeha tany amin'ny lafiny Brighton & Hove Albion ambanin'ny 23 izay nanatontosa ny laza teo amin'ny faha-15 ambin'ny folo taonany. Fantatrao ve?… Ny lafiny Under-23 dia nahomby ho azy tahaka azy nomena anarana hoe mpilalao tamin'ny taona tao amin'ny 2018 / 2019 Premier League napetraka ambany-23, ka nahazo ny laharana 11.
Aaron Connolly- Ny Premier League2 2018-2019 Player of the Season Award. Credit: Twitter
Nandresy ity mari-pankasitrahana lehibe ity dia nahasarika ny mpiasan'ny ekipa zokiolona Graham Potter izay nanetsiketsika ny fiverenany tany Brighton taorian'ny fisokafan'ny trosa avy any Luton Town
Niaritra ny fiakaran'ny meteorika i Aaron Connolly Andro faha-5 tamin'ny Oktobra tamin'ny lalao nifanandrina Tottenham izay nahitany ny tanjony voalohany amin'ny Ligy voalohany indrindra, dia in-droa in-droa tamin'ny fandresena an-trano 3 – 0. Ity ambany ity ny santionany fihetsika iray. Credits mankany SpursTV.
Fantatrao ve?… Ireo tanjona ireo dia nahatonga an'i Connolly ny 100th Irlandey ho baolina isa amin'ny Ligy Premier ary ilay zatovo voalohany nahazo isa ho an'ny Brighton tamin'ny ambaratonga Premier League.
Nankalaza ny tanjony malaza i Aaron Connolly amin'ny Spurs. Credit: mahaleo tena
Tsy isalasalana fa ny ankizy mahagaga dia nanaporofo tamin'ny mpankafy baolina kitra fa ny famokarana Irlanda ho an'ny fandrosoana dia TSY MAINTSY METY!. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Relationship Life
Ao ambadiky ny lehilahy mahomby rehetra, misy vehivavy. Ho an'ny mpilalao baolina kitra toa an'i Connolly, dia misy WAG mahafinaritra be… izay manondro sakaizany tsara tarehy izay mandeha amin'ny anarana Lucinda Strafford. Araka ny nambaran'ny kaonty media sosialy dia samy nifamerina teo amin'ny janoary 2019 ny mpifankatia.
Ilay tovovavy tsara tarehy nataon'i Aaron Connolly- Lucinda Strafford. Credit any Instagram
Lucinda Strafford dia tsy isalasalana fa brunette mahafinaritra izay mampiorina ny fahatokisan'ny tsirairay ao aminy. Olona tsy mahavita tena izy tsy manao zavatra hafa ankoatra ny fanohanana ara-pihetseham-po amin'ny lehilahy azy na ianao aza midika fa mitazona ny fiainany manokana.
Aaron Connolly dia manana sipa matotra tokoa. Ny trosa amin'ny IG
Iray amin'ireo fitsangantsanganana ankafizin'ny mpivady mandritra ny fahavaratra ny nosy Espaniola Tenerife sy ny ranon'i Ibiza. Raha jerena eto ambany dia tena tia an'i Aaron Connolly i Lucinda, izay lazainy matetika hoe "ny andriana".
Mahafinaritra an'i Aaron Connolly amin'ny sambo mandeha sambo miaraka amin'ny sakaizany- Lucinda Strafford
Samy ho iray amin'ireo mpivady tena napetraka ao amin'ny Brighton & Hove Albion Football Club i Aaron Connolly sy ny olon-tiany Lucinda. Ny tsy nifankahitan'izy ireo nandritra ny fotoana kelikely izao dia tsy isalasalana fa ny mariazy dia mety ho dingana manaraka.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny zava-misy marina momba an'i Aaron Connolly amin'ny fiainana amin'ny lavitra tsy hahita azy amin'ny hetsika eny an-dàlana dia hanampy anao hahazo sary feno aminy.
Aaron Connolly Life Life Facts. Credit: Twitter
Rehefa mitsara avy amin'ilay sary etsy ambony dia ho hitanao i Aaron Connolly dia olona somary hafahafa sy mahery vaika izay maniry hitoetra ho sambatra amin'izay azony. Hitany mora ny mampifanaraka ny angovo manodidina azy ary mampiasa ny sainy isaky ny afaka manao izany.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Hararaotin'i Aaron Connolly fa nanao ny lalan'ny fianakaviany mankany amin'ny fahaleovantena ara-bola ny fisaorana noho ny baolina kitra. Hatramin'ny andro fahatanorany dia nandray ny andraikitra mahazatra ny ray aman-dreniny mba hahita azy hilalao ny lalao rehetra ataony.
Aaron Connolly miaraka amin'ireo ray aman-dreniny mpanohana rehefa nahazo tropy.
Na i Mike sy i Karen dia nahazo sidina voalohany mba hahitana ny fanombohan'ny Ligy Premier voalohany sy tanjona roa. Rehefa nandray andraikitra i Connolly dia fantatr'i Dada rehareha fa nanatanteraka ny nofinofiny ny zanany lahy.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Lifestyle
Ny hahafantaranao hoe ahoana ny fomba fiainan'i Connolly momba ny fandaniany ny volany dia hanampy anao hahazo sary tsara kokoa azy.
Fanombohana, ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fahaizana sy ny fahafinaretana amin'izao fotoana izao dia tsy safidy sarotra ho an'ny Whiz zaza. Ny fahazoana vola amin'ny lalao baolina kitra dia tsy ilaina fotsiny fa mandany izany amin'ny vehivavy sakaizany Lucinda Strafford rehefa mitsidika ohatra momba ny toerana mahafinaritra izy ireo; ( Jamaica, St Lucia, Mauritius, Ibiza, Antigua ary Las Vegas) toa azy, ny fomba fiaina mahazatra.
Aaron Connolly Fiainana fiainana. Ny trosa amin'ny IG
Ny fomba fiainan'i Aaron Connolly dia tsy mitovy amin'ny endriny izay hoheverin'ny olona hijery ny sary etsy ambony. Hita fa mbola manana fototra mafy izy amin'ny fihazonana ny volany amin'ny fandinihana sy ny fandaminana tsara. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana dia tsy misy marika ny fiara feno fampitana fiara / exotic, ny tranom-bidy, ny karatra mavesatra sns.
Tantaran'i Aaron Connolly Childhood momba ny zava-misy amin'ny Untold Biography Facts - Untold Facts
Ny Modely entiny: Tahaka ny mpilalao baolina kitra Irlandy marobe, i Connolly dia mankafy ny angano Iraniana, Robbie Keane izay itovizany aminy. Novaliany izy rehefa lasa zatovo Irlandiana voalohany (hatramin'ny Robbie Keane ao amin'ny 1999) hahazoana brace amin'ny lalao anglisy top-flight. Ity ambany ity ny sasany amin'ireo paikadim-panatrehana tanjony izay ampitovina amin'ny angano Robbie Keane. Ny trosa amin'ny VTSports
Nahatsapa izy fa ny praiminisitra zokiolona ao Irlandy dia prank: Herinandro monja taorian'ny herim-pandresahan'izy ireo an'i Spurs izay nitondra azy ho lehilahy manana ny fampisehoana lalao, Aaron Connolly, taty aoriana dia nahazo antso avy amin'ny tompon'andraikitra ambony any Ireland Mick McCarthy ho an'ny fireneny ho an'ny Euro 2020 ho avy manaraka an'i Georgia sy Switzerland. Nahatsapa izy fa sahy izany taorian'ny filazany azy ny vaovao. Ny ambiny, araka ny fahitany azy dia lasa tantara.
Nihaona tamin'ny lehiben'ny Irlandey Mick McCarthy i Aaron Connolly andro iray taorian'ny andro niantsoany ny ekipa zokiolona tany Irlandy. Fahazoan-trosa amin'ny Sportsfile sy Independent
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namaky ny tantaranay an'i Aaron Connolly Childhood ary ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Diary Football Irish
Dries Mertens Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra